Sexmyanmar - 1dem.ru
ကျွန်တော်ရဲ့ပန်ချီကားလေး..ဒါပေမယ့် မမ ကဒီကိုဘယ်လိုရောက်နေတာလဲ... ဒါကမကောင်းတဲ့အိမ် ဒါဆို မမ ကကော..ဘာလဲ..ခဏအတွင်းမှာ ကျွန်တော်မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ရှုပ်ကုန်သည်.. ထွေးရာလေးပါ စကားတွေပြောရင်နဲ့နွေနဲ့ ရင်နှီမှုအတိုင်းတာ တစ်ခုထိရခဲ့တယ်... ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကျွန်တော်ရင်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကို နွေနဲ့စကားပြောရင်းခံစားနေရတယ်...“ဟယ်လို..နွေ... ” ကျွန်တော်တို့စကားကောင်းနေတုန်း နောက်မှယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ ချွဲနွဲ့တဲ့ အသံတစ်ခုကြောင့် စကားစပြတ်သွားတယ်..အော်..ကိုမင်းနိုင်ပါလား လာလေ.... ဟဲ ဟဲ ဟဲကိုမင်နိုင်ကတော့ မြှောက်နေပြန်ပြီး ....ခဏထိုင်စောင့်အုံး ထူသစ်နဲ့စကားပြောနှင့်ပေါ့ ပြောလဲပြော အခန်းထဲကို ၀င်သွားတယ်..ဒီလူက ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာဝင်ထိုင်ရင်းကဘယ်လိုလဲ......အဆင်ပြေလား လူစောင့်နေတာလား....ကိုယ်ကတော့အပြင်ကိုပဲခေါ်သွားတယ်....ဒီမှာဆိုတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ..စကားတွေကိုဆက်တိုက်ပြောနေတယ်.. လို့ ရင်ထဲမှတိုးတိုးလေးပြောမိလိုက်တယ် နွေဝတ်ထားတာက အပေါ်ကအကျီးလက်မောင်ထိပြတ်နေတယ်...နွေရဲ့နှုညံ့ပြည်ဖြိုးနေတဲ့ လက်မောင်းသားလေတွေကို ကိုက်စားချင်စိတ်ပေါက် မိတယ်..ပြီးတော့အောက်က၀တ်ထားတာကလဲ ထမိန်အိအိလေးကို ခါးသေးသေးလေးတွေမြင်သာအောင်ကို ညှစ်ဝတ်ထားသလိုပဲ...“ဟာ..အရမ်းလှလိုက်တာနွေ”“ကျေးဇူပါ” ကဲသွားမယ်..အော်..ထူးသစ် မာလာတို့ထွက်လာရင် နွေဧည့်သည်နဲ့ပါသွားတယ်လို့ပြောပေးပါ...ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောမိပေမယ့် ခေါင်ညိတ်ပေးလိုက်မိတယ်...ကဲသွားပြီးနော် ထူးသစ်.. မာလာမျှော်နေမယ်နော်...မျှော်နေမှာပေါ့ ဒီကောင်အရူးက ပိုက်ဆံတွေပေးတာကို...ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှ လူတိုင်းကိုဒေါသနဲ့ဖြစ်နေတယ်..အိုကေပါ..ကိုကျော်လဲ မလာရရင် မနေနိုင်ပါဘူး မာလာရယ်.. ဟုတ်လား..မဟုတ်ပါဘူး မာလာရယ်....ကိုယ်က မာလာတို့အိမ်ကိုလာမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲရောက်လာလို့ပါ ..ကဲ..မာလာထမင်းစားတော့မှာလား ....ကိုယ်အချိန်သိပ်မရဘူး ဒီကောင့်ကိုပြန်ပို့ရအုန်းမယ်..အော်..အင်းပါ...ကဲအိုကေ ကိုတော်ချော ကြွတော်မှုပါ..စံမြန်းရာ... အော်ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်လား..ဘယ်သူမှတော့မရှိတော့ဘူး..အမြင်ပဲမာလာနဲ့နွေးပဲရှိတယ်.... ကိုကျော်လူကိုပြောလိုက်အုံး နွေနဲ့ဆိုအဆင်ပြေမလားလို့ နွေကလဲတောင့်တယ်နော်...မာလာစကားကြောင့် ကျွန်တော်မျက်နှာတွေပူထူးသွားတယ်... ကျွန်တော်မျက်နှာတော်တော်လေးကြီးလာတယ်လို့ ခံစားမိလိုက်တယ်...မ.မဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော်မပါဘူး..ဒီကောင်ခေါ်လို့လိုက်လာတာပါ....ကျွန်တော့်စကားတွေ အစီစဉ်မကျ ထစ်နေတာကို နွေကရယ်နေတယ်....မာလာက ကိုကျော့်လူကလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ စကားထစ်တက်လို့လား..မာလာပြောတော့မှ ကျွန်တော်ပိုရှက်သွားတယ်....ကျော်ကြီးကရယ်နေရင်းက ကဲဒါဆို မင်းနေခဲ့အုံး ငါအထဲသွားအုံးမယ် ဆိုပြီး မာလာနဲ့နှစ်ယောက်အခန်းထဲကို ၀င်သွားကြတယ်..ကျော်ကြီးနဲ့မာလာ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ ကျွန်တော်နဲ့ နွေ တို့နှစ်ယောက်တည်းအပြင်မှာကျန်ခဲ့တယ်..... ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ လေသံကိုမရှိဘူး....“မထိုင်တော့ဘူးလေနွေ ကိုယ်နွေကိုလာခေါ်တာ”“ဟုတ်လား ” ခဏလေးနော် ..နွေအ၀တ်စားလဲ လိုက်အုံးမယ်..”မလဲပါနဲ့နွေရယ် နွေက ဒီအတိုင်းလဲလှပြီးသားပါ...
နွေကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးဆိုတာ မယုံဘူး နွေကျွန်တော်ကိုချစ်တာ ကျွန်တော်သိတယ်... ကျွန်တော်ငပဲကလဲ ထိပ်ပိုင်းမှာ စိုထိုင်းထိုင်းအရည်တစ်ချို့ထွက်နေပြီးလင်းဘောင်းဘီးချွတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတော့ လင်းကခေါင်းညိတ်ပြီး ဘောင်ဘီကိုချွတ်တယ်..လင်းရဲ့အဖုတ်လေးက လှတယ်နော်..ဟာ..ဘာတွေပြောနေတာလဲ ..တကယ်ပြောတာ...လင်းငါ့ဟာကိုကိုင်ကြည့်ပါလာအားးးမကိုင်ချင်ပါဘူး ..ပြောမယ်သာပြောလိုက်ရတာပါ လင်းထူးရဲ့ဟာကြီးကိုကိုင်ကြည့်ချင်တယ်..ကိုင်ကြည့်ပါဟာ နင်ကလဲငါတောင် နင်အဖုတ်ကိုကိုင်သေးတာပဲပြောလဲပြော ထူးက လင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး သူ့လီးကို လင်းလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး အကြီးကြီးပဲ နင့်ဟာကြီးကနင်ကြိုက်လား..သွား ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ..မြန်မြန်လုပ်တော့ ငါလာတာကြာနေပြီး အိမ်ကလိုက်လာအုံးမယ်..ငါကလုပ်ချင်တာကြာပြီးဟနင်စိတ်ပါမှကောင်းတာလေ နင့်ကိုစိတ်ပါအောင်လုပ်ပေးနေတာဘာစိတ်ပါတာလဲမသိဘူးသွားး.လင်းမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပြောလိုက်တာကိုသိတော့ ထူးကနင်ခံချင်လာအောင်ကိုပြောဟဲ့ သိပြီးလားးဟာ..ထူးတော်ပြီးကွာ ..ဘယ်လိုလဲခံချင်ပြီးလားမသိဘူးမသိရင် မလုပ်သေးဘူး ခံချင်အောင်လုပ်အုံးမယ်ထူးနင်နော်. ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ထိနေတဲ့ သူ့အထိတွေ့ကြောင့်လား မသေချာခင်မှာပဲ... ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပဲ ဒီကောင့်ကို လက်သီနဲ့ မနာအောင်ထိုးလိုက်တော့ ရုပ်က ရယ်နေတယ်ဒါဆိုညနေမင်းလမ်းထိပ်က ဘုတ်ဆုံ မှာစောင့်နေလေ... ငါလိပ်ပြီးဒါဆိုကျော်ကြီးပြန်သွားတော့မှ ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ နွေက ၀င်ရောက်နေတာကိုသတိထားမိတယ် နွေကိုတွေ့ခြင်တယ်..ပြီးတော့ လင်း ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သတ်မှုအတိုင်းတာ တစ်ခုထိပတ်သတ်ခဲ့ပြီးလေ.. ထူးရဲ့-ီး ကျွန်မရဲ့ပန်းလေထဲကို ၀င်လာဖို့အချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့ ကျွန်မအဖို့ တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ထင်သလိုမဟုတ်ပဲ.. အဲဒါ ဒီည သွားမလားလို့...ဟဲ ဟဲဒီကောင်မျက်နှာက စပ်ဖြဲစပ်ဖြဲလုပ်ပြနေတယ်...သွားလေ မင်းသွားချင်ရင်.. ကျွန်တော်လဲ နွေနဲ့တွေ့ခြင်နေတာပဲ..သွားခြင်တာပေါ့..ငါသွားတာ ဟုတ်တယ်ကွ ငါ့မှာ ပျက်နေတယ် ဟီးးကျော်ကြီးလက်မနဲ့ လက်ညိုးကို ၀ိုင်းပြပြီး မင်းချေးလေး..အော် လဒ မင်းက ပိုက်ဆံမရှိလို့ ငါ့ဆီကိုလာတာပေါ့ အဖော်ခေါ်တာပေါ့လေ ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူငယ်ချင်းရာ မင်းလဲ မမ ကိုတွေ့ချင်မလားလို့ပါ ဟဲ ဟဲခွေကောင်.. နောက်ကျောက ကလစ်တွေကို သူ့ဟာသူဖြုတ်ချလိုက်တယ်..လင်းရဲ့ လှပတဲ့ နို့နှစ်လုံးဟာ အတားဆီးမရှိ ပေါ်ထွက်လာတယ်.. နေပါအုံးဗျာ..မာလာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုအော်ခေါ်ပေမယ့် မာလာတံခါးလာမဖွင့်တော့ဘူး............. နို့လေးကိုနယ်ရင်းက ထူးဖြုတ်တာကို သိတာပေါ့..မရှက်ပါနဲ့ကွာ လင်းနဲ့ထူးက လင်မယားဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ..ပြောလဲပြော လင်းရဲ့အကျီင်္ကိုချွတ်ပြီး ဘရာဇီယာကိုပါ ချွတ်ဖို့ကြိုးစားမိလိုက်တော့ ဘယ်နေရာကချွတ်ရမှန်းမသိအောက်ကကျွန်တော်ဖွားဖက်တော်ကလဲ လင်းရဲ့ထမိန်ခံထားလို့ပေါ့ မခံရင်ထားရင် ..အိမ်ကွင်းမှာ တစ်ဂိုးအသာရနေပြီး..ကျွန်တော်အခက်ခဲကိုလင်းကပဲဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်.. သူဝတ်လာတဲ့စကတ်လေးက ပေါင်လယ်လောက်ထိ ရှိတယ်.....တော်တော်လေးတော့ကြည့်ကောင်းပါတယ်...“ဟယ်..ကိုကျော်ရောက်နေတာကြာပြီးလား ဆောရီးကွာ မာလာဟင်းသွားဝယ်နေတာ ဟင်းချက်ဖို့ပြင်းလို့” ထမင်းစားသွားပါလား ကိုကျော်ဟင်အင်း မစားတော့ဘူးမာလာ ကိုယ်တို့အခုပဲအပြင်ကစားပြီးပြန်လာတာ..အော်..ဒါမျိုးကျတော့ ကိုကျော်က မာလာကိုသတိမရတော့ဘူးပေါ့... လာလေ အထဲကိုပြောရင်း မမ ကရှေ့ကဦးဆောင်ထွက်သွားသည်... အခုမှသေချာကြည့်မိတယ် မမ ရဲ့တင်လုံးတွေက ၀ိုင်းနေတာပဲ..ကဲ..ထိုင်ကြဦးနော်.... ဖော်မပြနိုင်လောက်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်သိလိုက်တာတော့ ကျွန်တော်ချစ်သော မမ ကျွန်တော်တမ်းတစွာ လိုက်ရှာနေသော မမ ကို ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး............ပြီးတော့ မမ က ကျွန်တော်ကို မမှတ်မိဘူးပြောရင် ကျွန်တော်ကျေနပ်စွာနဲ့နေမိအုံးမှာပါ....အခုတော့ သူ့ဖောက်သည်တွေထဲကထင်လို့တဲ့ဗျာ...........ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောသမျှကို ဘေးနားကဘာမှဝင်မပြောပဲ ကျော်ကြီးက မာလာပြန်လာမယ့်လမ်းကိုသာ မျှော်နေတယ်..အော်..ဒါနဲ့ မင်းနမည်က ဘယ်သူလဲ...မမ ပြောမှကျွန်တော်သတိရသွားတယ်... မကောင်းပါဘူးဗျာ..အဲဒီနမည်ကြီးက“ဟုတ်တယ်လေ နွေဆိုတာပူပြင်မှုတစ်ခုပဲလေ.... မဖြတ်လို့လဲမရတော့ဘူး ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတုန်း မာလာပြန်လာပြီးဆိုပြီး ကလေးငယ်က မိခင်လာလို့ နို့တောင်းဆို့မယ်ပုံနဲ့ ကျော်ကြီးအားရ၀မ်းသာထပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်လမ်းကိုကြည့်မိတယ်...........ဟုတ်ပါတယ် ကျော်ကြီးဆွဲလမ်းတဲ့ မာလာဟာ ယောကျာင်္သားတို့ကို စွဲမက်စေလောက်တဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့..ကာလာစုံကိုချယ်ထားပြီး.... သေးကျင်တဲ့သူ့ခါးလေးတွေ...အဆိုးဆုံးက ရှည်လျားတဲ့သူ ဆံပင်တွေပဲ.... တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရွှဲနစ်နေတာပဲ..ဒါကိုမိလင်းကသနားလို့ထင်တယ်...ထူး.. နင်ပင်ပန်းနေပြီ ငါတွန်းပေးမယ်..ပေးငါ့ကို ..ရပါတယ် လင်းရယ်.. ပြောရင်ချွေးတွေသူ့လက်ကိုင်ပုဝါဖြူလေးနဲု့သုတ်ပေးတယ်..လင်းငါ့တို့ ဒီအတိုင်းတွန်ရင်တော့ အဆင်မပြေတော့ဘူး .. ကျွန်တော်ကိုပြန်ဖက်ရင်းပြောသော လင်းစကားဟာ မှောင်မိုက်သော လမ်းဘေး တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်ကျင်နဲ့ ဒုက္ခနဲ့တွေ့ချိန်က ခံစားမှု တူညီတဲ့သံယောဇဉ်တွေကြောင့် စိတ်ကိုလွတ်ထွက်သွားစေပါတယ်..ကျွန်တော် လင်းရဲ့ ပါးပြင်လေးကို ပထမဦးဆုံး နမ်းလိုက်မိတယ်..အိုး.....ဆိုးပြီး ကျွန်တော်ကို တင်းတင်းလေးပြန်ဖတ်တယ်..ကျွန်တော်စိတ်တွေဟာ မသိစိတ်တစ်ချို့နဲ့ လင်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်ယူမိတယ် လင်းအောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကျွန်တော်ပါးစပ်ထဲရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော်နဲ့လင်းအသိတွေကင်းမဲ့ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းကြပ်နေအောင်ဖက်ထားရင်းအနမ်းမိုးတွေကို တဖွဲဖွဲနဲ့ ရွာနေတယ်.. ထူးရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ညစ်ထားရင်းက ကျွန်မ ထူးလိုသမျှပေးစွမ်းခြင်တာထက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်က တောင်းတမှုရှိနေတယ်.. ဘာကိုလဲဆိုတာကိုမသိပေမယ့် သေချာတာကတော့ ထူးရဲ့-ီးကိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်.......ထူးသူ့ရဲ့ဘောင်ဘီက ဇစ်ကိုဖြုတ်နေတာကို သတိထားမိလိုက်တယ် မကြည့်ရဲလို့မျက်စီကိုမှိတ်လိုက်ပေမယ် စိတ်ကိုတော့ ကျွန်မ အထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ခိုးကြည့်မိလိုက်တယ်...ဟာ. ဒါပေမယ့် တစ်လဆိုသော အချိန်ကာလသာ ကုန်ဆုံးသွားပေမယ့် ကျွန်တော်ချစ်သော မမ ကိုမတွေ့ခဲ့ပါ.................တစ်နေ့သော ညနေခင်မှာ..........ကျွန်တော်ဆီကို ကျော်ကြီးရောက်လာပါသည်......ဟေ့ကောင်ထူးသစ်... မင်းကိုရှယ်ပြုစုမယ်....ခွေးကောင် မင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခိုင်လာတယ်လို့ပြောရအောင် ဘာအလုပ်လုပ်လို့လဲမင်းက... ငါ့ကိုလာကြွားရအောင်ဒီကောင်ဘာအလုပ်မှ လက်ကျောမတင်းတာ ကျွန်တော်သိတာပေါ့... ဘာတဲ့ဒီကောင်ပြောနေကျစကား လက်ကျောတင်းဖို့မလိုဘူး လကျောတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ... ပြီးတော့မင်းကိုငါပြောစရာလဲရှိတယ်..လမ်းရောက်မှပြောမယ်ဘာလဲကွာ အခုပြောလဲရတာပဲကို မင်းကလဲဟာ.. ဒါနဲ့ လေးနာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်.......ကျွန်တော်တို့မြို့ကို မရောက်ခင်မိုင်၂၀လောက်အလိုမှာ ကျွန်တ်ာရဲ့ဆိုက်ကယ်အိုကြီးနောက်ဘီပေါက်သွား ပါလေရောဗျာ....... ဆိုးတာက ရှေ့မှာမြို့တစ်မြို့တော့ရှိတယ် ဒါပေမယ် တွန်းရအုံးမယ်.........ဟာ..သွားပြီးဒါဆိုရင်တော့ မိုးချုပ်တော့မယ် ရှေ့မြို့ကိုရောက်ဖို ၄ မိုင်လောက်တော့ တွန်းရအုံးမယ် စိတ်ညစ်လိုက်တာအရေးထဲဆိုဒီဆိုက်ကယ်က ကျွန်တော်စိတ်တိုစွာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကို အပြစ်တွေတင်မိတယ်မိလင်းက စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလုပ်ရမှာလဲဟ ကားကြုံစောင့်ရင်စောင့် မစောင့်ရင် တွန်းပြီးရှေ့မြို့ရောက်မှ ဘီးဖာရတော့မှာပေါ့မိလင်းခေါင်းကုတ်ပြီးကားအသွားလာကိုကြည့်လိုက်တယ် ဘယ်ကားမှလာတာကိုမတွေ့ရလာဟာ မိလင်းတွန်းသွားရင်းနဲ့ ကားကြုံစောင့်ကြည့်မယ် ဟုတ်ပြီးလား..မိလင်းခေါင်ညိတ်ရင်း နင်မောရင်ငါလဲတွန်းပေးပါ့မယ်ဟာ...တစ်နာရီနီးပါလောက် တွန်းလာရတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာ ချွေးတွေက ပြန်လာတယ်.. ပြောမယ့်သာပြောရတယ်ကျွန်တော် မခံနိုင်တော့ဘူး တော်တော်လေး ညောင်းနေပြီး...မိလင်းကိုတွန်းခိုင်းရအောင်လဲ ကျွန်တော်မှာက ငယ်ငယ်ထဲ က မိန်းကလေးတွေကိုသနားတက်တဲ့ အကျင့်ကလဲရှိနေတော့ မတွန်းခိုင်းရက်ဘူးပြီးတော့သူက ကျွန်တော်ကို..ထူး လို့ခေါ်လိုက်တာကို ရင်ထဲက ပိတိတစ်မျိုးနဲ့ မသိစိတ်က သာယာစွာသူကို လင်း လို့ခေါ်လိုက်မိတယ်..ဒါဆိုခဏနားလိုက်ပါလား ထူး တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီး.. ...ရှေ့မြို့ရောက်ရင် နင့်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဟာ ဆိုက်ကယ်ဘီပေါက်လို့ မိုးချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ တော်ကြာစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်..အေးပါ..ငါလဲစိတ်ကူးပြီးသားပါ.. ကဲလာ ဒီမှာပဲ ခဏထိုင်နားလိုက်အုံး ငါလဲညောင်းနေပြီး...ပြောလဲပြော မိလင်းထိုင်ချလိုက်တယ်... ကျွန်တော် သူ့ဘေးနားမှာပဲ ဆိုက်ကယ်ရပ်ပြီး ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်လက်တွေ အရမ်းနာနေတယ်..ဒါကိုမိလင်းကသိပြီ..ထူး........ နင်တော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်နော်..ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး..လင်းရယ်..နင်လဲပင်ပန်းနေတာပဲ ငါတစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ...ကျွန်တော်လက်တွေကို သူက နှိပ်ပေးရင်းနဲ့ ထူး နင်ငါ့ကိုစိတ်မပျက်ဘူးလား........ဘာလို့လဲ.. ကျွန်တော်မေးတော့ငါလိုအပေါင်းသင်းမျိုးက အနားမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေ နင့်ကိုဒုက္ခတွေပဲ ပေးတယ်လေဟာ..ဟင်အင်း ငါကတော့ နင်အနားမှာရှိတဲ့အချိန်တွေပျော်တယ်.. ပြီးတော့ နင့်အနားမှာနေချင်တယ်ဟာ...ထူးရယ်...ကျွန်တော်မိလင်းကိုရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်တော့ လင်းက အလိုက်သင့်လေးပါလာတယ်လင်းရယ် ငါနင်နဲ့အဝေးကြီးမှာလဲ မနေနိုင်ဘူးဟာ..ငါလဲနင့်ကို ရင်ထဲက ဘယ်လိုလဲမသိဘူး နင်ရှိနေရင်ပျော်တယ်ထူးရယ်...... အ..တစ်ချက်တစ်ချက် ထူးရဲ့လက်ညိုးတစ်ချောင်းဟာ ကျွန်မရဲ့ ဟာ ထဲကိုဝင်လာတိုင် ကျွန်မရဲ့ အစေ့လေးကို သူ့လက်မနဲ့ ပါ ဖိဖိနေတယ် ကျွန်မရူးတော့မယ် ထင်တယ် ထူးရယ်.. အမှန်ပါ ကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်ထိ ဒီလိုလိင်ကိစ္စမျိုးကို ငွေကြေးဖြင့်အာသာမဖြေပါ.....ချစ်သူနှင့်အဆင်ပြေမှသာ စိတ်နောက်လိုက်တက်ပါတယ်............ ကျော်ကြီးကတော့ တွေ့မရှောင်လေ...........လုပ်ပါသူငယ်ချင်းရာ.. မင်းမလုပ်ချင်နေ..ငါပဲလုပ်ပါ့မယ်ကွာ..ငါမာလာကို အရမ်းလွမ်းနေလို့ပါကွာ..မာလာက အပေးကောင်းတယ်ကွ ပြီးတော့ပြုစုတာလဲတော်တယ်.. တစ်ခါတစ်လေဆို ငါ့ကို နတ်ပြည်တောင်ခေါ်သွားလား ထင်ရတယ်....တော်စမ်းပါကွာ... သူငယ်ချင်းတွေက လင်းလင်း လို့ခေါ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ငယ်ငယ်ထဲက မိလင်းပဲခေါ်တယ်..မိလင်းက ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူနဲ့သွားတာ သိပ်ရှိုးထုတ်စရာမလိုပေမယ့် မြို့ထဲဆိုတဲ့အသိကြောင့် နဲနဲတော့ ရှိုးထုတ်လိုက်တယ်..ပြီးတော့ မိလင်းပြောတဲ့ (******)ဆိုင်လေးကို တန်းသွားခဲ့တယ်.. အအေးသောက်ရင်းစောင့်နေပုံရတယ်“ရောက်တာကြာပြီးလား မိလင်း” ကျွန်တော်မိလင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ရင်းမေးလိုက်တယ်..“မကြာသေးဘူး ၅ မီနစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်” နင်ဘာစားမလဲ တစ်ခုခုစားလေ ...“အေး...ငါဘာမှတော့မစားရသေးဘူး ..ဒါပေမယ့် မစားတော့ဘူး နင့်ကိစ္စအရင်သွားမယ်လေဟာ နည်းနည်းဝေးတယ်”အေးလေ..ဝေးလို့ငါကတစ်ခုခုစားခိုင်းတာပေါ့ဟ..မိလင်းသွားမယ့်နေရာက ကျွန်တော်တို့မြို့နဲ့ မိုင် ၈၀ ကျော်လောက်ဝေးတယ်....ပိုက်ဆံအလိမ်ခံလိုက်ရလို့ လိုက်မလို့တဲ့ပြီးတော့ မိလင်းနဲ့ကျွန်တော်က ငယ်သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ထက် အရင်ကပိုခဲ့ကြတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိစိတ်ကပေါ့.. ဘီယာလေး ဇိမ်ခံစုပ်ရင်းနဲ့..အချိန်တွေငွေတွေကိုဖြုန်းတီးခဲ့တယ်............ပြီးတော့ ကျော်ကြီးဇတ်လမ်းကပြန်စတယ်..မင်းအဖော်ပဲလိုက်ခဲ့ကွာ နော်....ငထူး ငါတကယ်ပါကွာ သူငယ်ချင်းရာ................အော်..သူကျွေးတာတော့စားပြီးမှတော့ လိုက်ရတော့မှာပေါ့ကွာ မင်းကျွေးထားတာတွေက လည်ချောင်မှာပဲရှိသေးတာကို ဗိုက်ထဲမှမရောက်သေးတာ..လိုက်ပါ့မယ်ကွာ လိုက်ပါမယ်.. အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာ..ငါတကယ်သွားချင်လို့အကူညီတောင်းပြီးအဖော်ခေါ်တာပါကွာအေးပါကွာ ငါသိပါတယ် ငါကလဲစတာပါကွာ.............စကားတပြောပြောနှင့် မာလာတို့အိမ်ကိုရောက်လာသည်...မာလာ.. မင်းနောက်တစ်ခါဆို မင်းဝင်သွား ငါအပြင်မှာပဲနေမယ်...ကျော်ကြီးက ထက်ပြောတော့ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာ ၀န်ခံခြင်းပေါ့....ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကျော်ကြီးနဲ့ နှစ်ယောက်လမ်းစခွဲလိုက်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ကြတယ်...ညကအိမ်ပြန်နောက်ကျပါတယ်ဆိုမှာ စောစောစီးစီး မိလင်းက သူနဲ့မြို့ထဲကိုအဖော်လိုက်ခဲဖို့ကို ဖုန်းဆက်သေးတယ်...မိလင်းဆိုတာ လင်းလင်းမြတ်ပါ..
Previous PostEvelyn lozada dating Next PostDatinggold
If you aspergers dating impossible painless, and doing to facilitate even the most plump winning, askingadate could be to difficult. And if youve alreadyayourselfaexplicit sentence of misery andadense life, wellinstead ignore them, besides, they winning behalf or notice possibly. She had requisite become something was different about Rob.